It is me. Ko Niknayman.: နအဖရဲ့Myanmar.com အကြောင်း။
န.အ.ဖ ရဲ့ Myanmar.com website ဟာ USA နိုင်ငံ New York မြို့ ကhttp://www.midatlanticbb.com/ဆိုတဲ့ ကုမ္မဏီ network ကဖြစ်ပြီး Linux Operating System kernel 2.4 နဲ့ Apache Web Server version 1.2.6 ပေါ် ကနေပြီးတော့ တင်ထားတဲ့ site ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီ site ဟာ networksolution.com မှာ နာမည်မှတ်ပုံတင် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အစပထမတော့ register လုပ်တဲ့ အခုထိ New York မှာနေတဲ့သူဟာ ကြောက်လန့် ပြီး သူ့ နာမည် တွေကို Domain information ကနေပြီး ဒီလို လုပ်လိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်ရာတွေကို ၀ိုင်းဝန်းအသိပေးပြီး တော့ သူတို့ရဲ့ တခုတည်းသာ Official ကျန်ရှိ နေသော site ကို ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်မပြုသင့်ပါကြောင်း။
Posted by Ko Niknayman at 2:56 AM